प्लास्टिकमा बेरेर पठाउनुपर्दा साह्रै रुन मन लाग्छ तर हामीसँग त्यहाँ रुने समय नै कहाँ हुन्छ र ? - Sidha News
प्लास्टिकमा बेरेर पठाउनुपर्दा साह्रै रुन मन लाग्छ तर हामीसँग त्यहाँ रुने समय नै कहाँ हुन्छ र ?
उनी अगाडि भन्छिन्, ‘आश मरेको बिरामी फेरि आशा लिएर आयो र एकाएक गयो । त्यो चक्र र उनको अहिले पनि खुब याद आउँछ । सायद म ती दाइको मृ’त्युलाई भुल्न सक्दिनँ होला । त्यस्ता भर्खरका युवाहरुलाई आईसीयूबाट प्लास्टिकमा बेरेर पठाउनुपर्दा साह्रै रुन मन लाग्छ । तर, हामीसँग त्यहाँ रुने र दुःखमनाउ गर्ने समय नै कहाँ हुन्छ र ?’
बिरामीको मृ’त्युमा दुःखमनाउ गर्ने समय छैन
जब मृ’त्युले जित्छ, तब शवलाई जतिसक्दो छिटो र्याप गरेर बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्था भएको मुना बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, बिरामीको मृ’त्यु भयो भने फटाफट शव प्याक गरेर निकाल्न पर्छ ता कि त्यो बेडमा (भेन्टिलेटर)मा बाहिर कुरेर बसेको अर्को बिरामीको उपचार छिटो गर्न सकियोस्। मृ’त्युमा दुःख मनाउ गर्दासम्म त अर्को बिरामीको ज्यान बच्ने सम्भावना हुन्छ नि ।’
मुना अगाडि भन्छिन्, ‘गम्भीर अवस्थाका बिरामी, जो हात समाएर मलाई बनाइदिनुस् सिस्टर भन्नुहुन्छ । हामीहरुलाई थाहा हुन्छ कि उहाँको अवस्था कस्तो हो भनेर । तर, हामीले बारम्बार झुट बोल्नुपर्छ, अब तपाई ठीक हुनुहुन्छ भनेर ।
हामीले त्यति भन्दा उहाँहरुमा बाँच्ने आशा पलाउँछ, आत्मबल बढेर आउँछ । त्यसैले पनि झुटो बोल्नुपर्छ । थाहा छ, उहाँलाई जे पनि हुनसक्छ । तर, पनि तपाईलाई निको हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुपर्दा मुटु फुलेर आउँछ । कस्तो ठाउँमा काम गर्नुपर्यो भनेर डिप्रेस भइन्छ ।’
मुना वीरमा मात्रै दिनमा एकदेखि दुईजना युवाको मृ’त्यु भइरहेको बताउँछिन् । कहिलेकाहीँ त तीन÷चारजनाको पनि मृ’त्यु हुन्छ । त्यसमा धेरैजसो युवा अवस्थाका बिरामी हुन्छन् ।
मुना भन्छिन्, ‘सरकारले भत्ता दिन्छ वा अस्पतालले केही सहुलियत दिन्छ भनेर हामीले काम गरेको होइन । यो हाम्रो पेशा हो, पेशामा आइपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्न हामी तयार छौं । तर, हामीलाई आश्वासन नदिइयोस् । आश्वासनले हामीलाई कमजोर बनाउँछ । हामी यो परिस्थितिमा कमजोर होइन, बलियो बन्न चाहन्छौं ।’